VLC Media Player အတွက်အကောင်းဆုံး add-ons ၄ ခု | Linux မှ
VLC အတွက်အကောင်းဆုံး add-ons ၄ ခု
Linux အသုံးပြုသူများသည် VLC ကိုနှစ်သက်ကြသည် သင်၏အဓိကဗီဒီယိုပလေယာပရိုဂရမ်အဖြစ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖွင့်စက်တွင်လုပ်ဆောင်စရာများစွာရှိသည် ၎င်းသည်ဒီဗီဒီနှင့် Blu-rays များကစားခြင်းမှသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကိုမဆိုလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်အထိလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သို့တိုင် VLC ရှိသွင်ပြင်များစွာအတွက်၊ တိုးတက်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေပြီးထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းအချို့ကိုယနေ့သိတော့မည် ဒီမီဒီယာဖွင့်သည်။
2 Playlist စာရင်းဆွဲယူပါ
အကယ်၍ သင်သည် YouTube ပန်ကာတစ်ခုဖြစ်လျှင် YouTube ဗွီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီသို့မဟုတ်သီချင်းစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုသင်၏ဒေသခံ VLC ဗီဒီယိုဖွင့်စက်သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်သောကြီးမားသော plugins အချို့ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
YouTube ဖွင့်စရာစာရင်းရရန်သင်လိုအပ်သည် အောက်ပါ plugin ကို download လုပ်ပါ.
box ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ VLC သည်အမျိုးမျိုးသော webcasts အမျိုးအစားများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ streaming protocols များ RTP, RSTP, HTTP နှင့်အခြားသူများသည် video player နှင့်မကိုက်ညီပါ။
အကယ်၍ သင်ဟာ Twitch streaming platform ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Twitch Playlist plugin မပါပဲသင်အကြိုက်ဆုံး VODs သို့မဟုတ် live streams များကိုကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပလပ်အင် Twitch Playlist သည် VLC ကိုဖြည့်စွက်သည်။ Linux အသုံးပြုသူများသည် live streaming အမျိုးမျိုးအတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ဒါဆိုဒီ plugin ကိုထည့်တာကသဘာဝပဲ။
လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုများ၊ တောင်းဆိုသည့်ဗီဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုစုဆောင်းမှုများနှင့်ဂိမ်းကလစ်များကြည့်ရှုခြင်းပါဝင်သည်။
ဒီ add-on ကို install လုပ်ဖို့သင် download လုပ်ပါ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ ဒီ link ထဲမှာ
VLC ဗွီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်များအတွက်စာတန်းထိုးကိုပြသနိုင်သည် ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေကိုရှာဖွေတာကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်စာတန်းထိုးရှာပေးသည့် extension သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
VLC plugin သည် OpenSubtitles.org နှင့် ဆက်သွယ်၍ အလုပ်လုပ်သည်။ သင်လိုချင်သောဗွီဒီယိုများအတွက်သင်လိုအပ်သည့်စာတန်းထိုးများရရှိရန်၎င်းသည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောဒေတာဘေ့စ်ကိုရှာဖွေသည်။
စာတန်းထိုးရှာသူ MacOS နှင့် Windows တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သော Linux support ရှိသည်Linux ပလက်ဖောင်းတွင် subtitle download tools များစွာမပါရှိသည့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဒီစာရင်းထဲကပလပ်အင်တွေလိုပဲ စာတန်းထိုးရှာသူသည် Lua script ဖိုင်ဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးခေါင်းစဉ်ငယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုစတင်ရန်သင်သည်တရားဝင်စာမျက်နှာသို့သွားရမည် အောက်ပါ link ကိုမှာ။
မည်သည့်ဗီဒီယိုဖိုင်မဆို VLC ကိုဖွင့်နိုင်သည်, ဒီဗီဒီ သို့သော် ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအမှန်တကယ်ပေးနိုင်သောစွမ်းရည်မရှိပါ.
VLC ရှိ Linux သုံးစွဲသူများအတွက်ဤအရာကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ extension ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည် Get Movie Info ကိုရယူခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သောရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် သင် VLC တွင်မြင်တွေ့နေရသောအရာများအကြောင်း။
Up Movie ရယူခြင်း Get Movie Info သည် VLC တွင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ extension ကိုမထည့်သွင်းမီ OMDb မှ API သော့တစ်ခုရရှိရန်လိုအပ်သည်။
plugin ကို download လုပ်ရန်သင်သွားသင့်သည် အောက်ပါ link ကိုမှe. API သော့ကိုရရန် OMDb ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ ပုံစံကိုဖြည့်ပါ။
"FREE" option ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုသူတို့သည် extension ကို download လုပ်ပြီးအောက်ပါ command များဖြင့် VLC တွင်ထည့်သွင်းရမည်။
ထို့နောက်မည်သည့်ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုမဆို upload တင်ပြီး၎င်းပေါ်တွင် right click လုပ်ပါ။ "watch" option ကိုရွေးပြီး "Get movie info" ကိုနှိပ်ပါ။
ဤအချက်မှာ sအီးသည်သင်၏ OMDb API သော့ကိုရိုက်ထည့်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဒါကိုလုပ်ပါ API သော့ကိုဖွင့်သောအခါ၊ VLC သည် Get Movie Info ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤအရာနှင့်သင် VLC တွင်သင်ကစားနေသည့်ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » VLC အတွက်အကောင်းဆုံး add-ons ၄ ခု
Excellent က !!
Raspberry Pi ဖောင်ဒေးရှင်းမှ PoE HAT လျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းထားသည်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကို Kano Computer Kit Touch ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ